Sivavanye i-Htc Desire HD saza sakuxelela into esiyifumeneyo | I-Androidsis
Njengoko besesitshilo, kwiintsuku ezimbalwa sinesinye seetheminali ebesiphakamisa olona lindelo lukhulu ukusukela oko kwabhengezwa, IHtc Umnqweno HD. Sele sikushiyele eyakhe unboxing Kwaye namhlanje kufuneka sinike izimvo ngokubonakala kwale Smartphone, lolona luhlu luphezulu lweetheminali i-Htc ekhoyo ngoku kwintengiso.
Ukukwazi ukuzama kuye kwabulela vipmobile, kwivenkile ekwi-Intanethi apho unokufumana zombini le Htc Desire HD kunye nezinye iimodeli ze-Android kwifomathi yasimahla ngamaxabiso aphantsi.
Zonke Ukucaciswa kobuchwephesha kwesiphelo onakho apha Sele sibakhankanyile kwizihlandlo ezininzi ke ndiza kunamathela ekuchazeni eyona nto ndiyifumene ibalulekileyo IHtc Umnqweno HD Kwaye ndicinga ukuba inokukunceda uthathe isigqibo kule terminal okanye hayi.
El IHtc Umnqweno HD ime ngaphezu kwayo yonke into inye, ubungakanani bescreen. I-intshi yayo eyi-4,3 ngobukhulu ngesisombululo seepikseli ezingama-480 × 800 yinto ethi wakube unayo esandleni sakho yonke into isiba ncinane. Le yinto enokuthi kwangaphambili inokuba sisizathu sokuyilahla le mobile xa ujonge into encinci kwaye inobukrelekrele.
Obu bungakanani bukwenza ukusetyenziswa kwesiphelo ngesandla esinye, nangona kunokwenzeka, kunzima ngandlela thile. Ndiyigxininisa kwividiyo yokuqala endikushiya apha ngezantsi.
Esi sikrini sikhulu kwaye isisombululo sayo samkelekile kodwa kunjalo sibonisa ukuba sijongane nescreen se-SLCD kwaye ayijongeka njengeSuper Amoled kwaphela. Imibala ithulisiwe ngandlela ithile kwaye ayikhanyisi kwaphela. Kucacile ukuba ukufakwa kwescreen se-Amoled Super ukongeza kwiindleko zayo bekuya kwenza ukuba le Smartphone iphantse ingoyiseki.
Enye into etsala umdla, kwaye ngeli xesha i-Htc ibethe isikhonkwane entloko, ngumzimba wakhe. Yenziwe ngesiqwenga esinye sentsimbi kakhulu kwisitayile esaziwayo seHtc Legend kodwa ngaphandle kokuba ibe yitoni yealuminium esiziswa yilesi sigxina. Yithoni yobhedu, mhlawumbi iyinika ubuzaza kunye nobukhosi kunye nobunzima kwiziphelo ezimbalwa ezinazo namhlanje.
Ngokubhekisele ekusebenzeni kwesiphelo, yitsho nje ukuba sijongane noluhlu oluphezulu lweetheminali ze-Htc kungamangalisa ukuba ibinengxaki ethile okanye ukusilela kule meko. Iprosesa yayo ye-1Ghz kunye ne-768 Mb ye-RAM yenza ukuba yonke inkqubo ibhabhe kubandakanya ukuvulwa kwezicelo, ukuvala kunye notshintsho, ngokubanzi yonke into ihamba ngokukhawuleza okukhulu.
Ngekhamera yayo ye-8 mpx enefleshi ephindwe kabini, ukugxila okuzenzekelayo kunye nomthamo wokurekhoda we-720p, ndicinga ukuba sinesimo se-multimedia sesiphelo esingaphezulu kwesisombululo. Ayinguye ugqirha wamehlo kaCarl Zeiss kodwa ngokwembono yam yenza umsebenzi wayo ngokumangalisayo. Ukongeza, isoftware elawula ikhamera ibandakanya imisebenzi emininzi njengoko uza kubona kwividiyo eyenza ukuba "umdlalo" onokusinika ikhamera mkhulu.
Elinye inqaku eliphantsi loku IHtc Umnqweno HD ibhetri. Sele inomboniso wayo, amandla ayo e-1230mAh abonakala enqabile kwaye ngelishwa besingekho kumkhondo ongalunganga. Ndingathi ukuthengwa kwebhetri yesibini kubaluleke kakhulu kusetyenziso oluphakathi oluphezulu lwesiphelo.
Ujongano lwayo yinguqulelo yesibini ye-Ht Sense, ukumiliselwa esikwaziyo kakuhle kwezinye iiterminal kwaye ngaphandle kwewijethi ezimbalwa kunye namanye amathuba okwenziwa kwemixholo emitsha ayiniki nto intsha.
Kufanelekile ukuqaqambisa isoftware entsha yokuhamba nge-GPS ebandakanyiweyo yi-Htc, eneenketho ezicacileyo nezicacileyo kunye nokufikelela okuququzelela ukusetyenziswa kwayo. Ewe kunjalo, amanqaku amatsha kwiwebhusayithi yakho htcsense.com ikhonkco kula matheminali nalapho sinokuthi sifikelele kwizibonelelo zesiphelo sendlela kunye nezinye iindlela zokukhangela kude kwifowuni kwimeko yokulahleka. Kodwa oku, endaweni yoko, ndiza kubajonga njengezincedisi kwi-Desire Hd endaweni yokusebenza njengesixhobo saso, esingamanqaku asithandayo kodwa ngokuqinisekileyo ayisiyiyo eyona nto ibalulekileyo xa usenza isigqibo nge-Smartphone okanye hayi.
Ukushwankathela sinokuthi Umnqweno weHtc sisiphelo esihle, inhle, iyakhawuleza, ilungele ukukhangela kwiwebhu okanye nokufunda incwadi engaqhelekanga (nangona ngokobuqu bendingazukucebisa ukuyenza kule okanye kwenye ilingana ngobukhulu okanye encinci), sinokujonga umxholo wemultimedia ngokumangalisayo kule ndawo yesiphelo Ngaphandle ngemibala ethe kratya kancinci kwaye apho sinokubona imovie okanye uthotho ngaphandle kokushiya amehlo ethu kakhulu. Ukuba songeza kule nto ukuba uyayithanda imbonakalo yeHtc ngokuqinisekileyo iyifowuni yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Sivavanye i-Htc Desire HD kwaye siza kukuxelela ukuba sicinga ntoni
Ibhetri isebenza ngesiqhelo, ithatha ixesha elingakanani? Xa kuthelekiswa ne-iphone4?
Phendula ujose maría
Le fowuni yoyikeka, ndiyibambile kunye nemvukelo ye-hd kwaye iyabhabha-ibhetri ihlala ixesha elide ngama-40 epesenti.
Mholo! Unjani! Ndizazisa nje kwesi sihloko kwaye ndingathanda ukwazi ukuba undicebisa phi ukuba ndikhuphele okanye ndinqande nge-Android revolution hd ...
Imeyile yam yile miguelmuzi@hotmail.com
Ndinayo kwaye ngamanye amaxesha ibhetri ayihlali iiyure ezili-12. Ndihlala ndiphethe itshaja kunye nam. Kuphela kwetyala endilibonayo. Ngaphandle koko sisiphelo esinamandla.
Ndinayo kwaye ndinayo i-iPhone 4. Ngokubhekisele kwibhetri, ziyafana ngokufanayo. Ndiyisebenzisa imini yonke kuyo yonke into: i-GPS, iifoto, ii-imeyile, iinethiwekhi, njl njl. Kwaye ndiyibiza ubusuku bonke ngebhetri yesithathu nangoku. Umhlobo wam usebenzisa i-iPhone 4 yakhe kuphela ngexesha lesidlo sasemini ukuncokola kwaye ukuba ngobusuku obunye akayibizi, kusuku olulandelayo ngaphambi kwesidlo sasemini akanayo ifowuni. Ndiyavuma ukuba ubomi bebhetri ye-HTC umnqweno HD iyaphucuka ngokuhamba kwexesha.
I-expectacula nje bendingalindelanga okungaphantsi kwi-htc njengoko besitsho kwezinye iisayithi kufana ne-htc evo 4g. kodwa ukuba i-4G .. hehe le terminal inoboya.
Oogxa abaliqela bacebisile le android kum njengenye yezona zibalaseleyo ngoku kodwa xa ndibona izicwangciso zamaxabiso zabaqhubi ndiziva ngathi bafuna ukundingcikiva, ukubona ukuba iiterminal ezintsha ziyaphuma na kwaye zehla ngexabiso, kude kube lelo xesha Ndiyaqhubeka nespica sam kunye neyoigo.
UAndy ujonge «founjaus» ukuba ngeyoigo kubonakala kulungile kakhulu. Ndizoyifumana
Ndi-odole i-HTC Desire HD kwaye inyani kukuba andinantandabuzo malunga nescreen sayo… Abanye abantu bathi intle kakhulu kwaye abanye bathi imbi kakhulu… Ndifundile ukuba isikrini sayo yi-SuperLCD, Amoled, TFT. yenze icace ukuba yeyiphi into enayo kwiscreen sale mobile? Injani? Enkosi…
Isikrini yi-SLCD kwaye ixesha lokuphendula lilungile, inye kuphela into yokuba imibala kunye nokuqaqamba kwesikrini akulunganga kakhulu, kujongeka njengokufiphele, ngaphandle kokuqaqamba. Konke okugqibelele
Enkosi kakhulu ngempendulo yakho antocara ...
Iscreen yi-superLCD (SLCD) kunye nescreen ukuba sinokukhanya okuninzi kunye nombala, kumalunga nokugqiba ukuba ungakanani umbala owufunayo nokuba ukhazimle kangakanani kwaye ungayifaka kuseto 😀
Uyintoni umntu osebenza naye obandayo…
Nceda, kodwa ungayalela njani ukuba uphonononge ividiyo nge-lisp eninzi kwaye "yu tu" (youtube) nabanye.
Sihlobo, sukuyenza ividiyo enomkhuhlane echaphazele umsebenzi wakho!
Ngokubhekisele kwiselfowuni ... ngumphathi! Isikrini asinamsebenzi kum ... ukusebenza kwayo kuyabukeka. Yintoni ukusetyenziswa kwescreen esine-amoled efana ne-Samsung kunye nefowuni iyabulala ?!
Abafana, ndiyifumene le vidiyo apho i-HTC Desire HD ivavanyelwa ukusebenza, andazi ukuba yenziwe ngesicelo se-Android (andazi i-Android), kodwa intsebenzo ikhohlakele xa ithelekiswa nezinye iitheminali… ..
Indawo ebuthathaka yale mobile, isikrini, kodwa njengoko isitsho «feps», kutheni ufuna iscreen se-SuperAMOLED, umzekelo i-SGalaxyS, ukuba uyayifuna umz. I-GPS kwaye iya esihogweni ... okanye ezinye iingxaki zesiphelo
Kakade, ibhetri yi-´´putada´´ kodwa njengakwezinye ii-mobiles kukho iiwebhusayithi apho bathengisa khona iibhetri zeetheminali ezingezizo ezokuqala kodwa ngomthamo omkhulu, andazi ukuba ikhuselekile kangakanani kodwa ke lukhetho, kwaye imibala yesikrini, andikhethi ukuba ine-4.3 '' engaphantsi kwaye inesikrini esamkelweyo, ngokunyanisekileyo ukuba ufuna ukubona imovie oyibonayo kwilaptop okanye kumabonwakude, kunye nokukhawulezisa isizungu ukubona iscreen kucinyiwe imibala .. Ndicinga ukuba yanele.
Kungekudala ndiza kuba nale terminal, ndiyibona ibhetele kune-iPhone 4 ukuya empumlweni kwiscreen.
Phendula kwi htcdesire
Impendulo yakho ayinakuya naphi na.
Andazi ukuba mandenze ntoni BAHEDA, ANDIGQIBIWE, ANDIZI UKUBA NDITHATHA LE SIQENDU SEBHODI OKANYE NOKIA N8, BANDIXELELE UKUBA UN8 WENZELWE IMULTIMEDIA, KUNYE I-HTC DESIRE HD YENZELWE ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA, INGXAKI ENKULU YE-HTC YOKUBA IBATTERY IHLALA ISIHLA NGOMHLA KUNYE OKUNYE UKUBA USEBENZISA ABANINZI, ANDIBONI IZINTO EZININZI EZILUNGILEYO ZOMNYE NEZINYE ENGINGAZI UKUBA NDINENZA NTONI INYANISO, Shiya IZIMVO APHA KULUNGILE, NDIBULISA KWI-TODSS KUNYE NOKUHLAZIYA KWEKrisimesi !!!
Awungekhe uthelekise i-nokia nale, ayipheleli kwanto, kuphela ikhamera ye-intshi ezi-12, ukuba akunjalo, uza kuchitha imali kwizinto ezingenamsebenzi (NOKIA UFFFFFF SHIT UNCLE)
Ungoyiki ibhetri, ihlala imini yonke uyisebenzisa emsebenzini (iposi, i-geolocation engapheliyo, i-whattsapp, intetho, i-gmail, utshintshiselwano kunye ne-imeyile). Iscreen kukungcamla, sendiyiqhelile kwaye inyani kukuba ibuhlungu kancinci kunaleyo yeGPS S kwasekuseni kwaye ngaphandle kokukhanya ebhedini !!! 😉
Ndinayo le fowuni kangangeentsuku ezi-3 kwaye ibhetri ihlala iiyure eziyi-7 kwaye ngaphandle kokuyisebenzisa kakhulu.Ngaba kuyinto eqhelekileyo kwityala lokuqala okanye kuya kubakho ingxaki?
Molo osebenza nabo, okokuqala ndikuxelele ukuba ndine-HTC DESIRE HD ukusukela nge-24 kaDisemba kwaye isebenza kakuhle.
Ukukhutshwa kwebhetri kuphuculwe xa kuthelekiswa neentsuku zokuqala (iiyure eziyi-7-8), ngalo mzuzu kuye kwafikelela kwiintsuku ezi-2, ke ukuba, xa ndisebenzisa ifowuni ngokuphakathi, andibanjwanga yonke imizuzu.
Kum kungcono kakhulu kune-iphone 4.
Ndinayo kutshanje kwaye iyanandipha.
Ibhetri iyinyani ukuba ayihlali ixesha elide.
Kodwa loo nto iyaphucuka ... kwiintsuku zokuqala, ukufuna ukubona yonke into onayo, awuyeki okomzuzwana, ngeentsuku zokuzola kwakho kwaye uzisebenzise xa uzifuna.
Nceda umntu anike ummemezeli iglasi yamanzi !!
Ndinayo ukusukela nge-4 kaJanuwari ka-2011 kwaye yonke into ibibalasele kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ndiqaphele ukuba iGPS ithatha ixesha elide ukuyilayisha (xa isenza njalo). Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kwenzeka ntoni? Ndingenza ntoni?
Ndine-htc umnqweno we-hd iinyanga ezimbalwa kwaye ekuphela kwento endiyifumanayo bubude bebhetri. Kufuneka ndiyiphathe yonke imihla. Nangona besele ndiyazi kwangaphambili, ndazi uhlobo lweLCD screen
Thelekisa ne-iPhone 4 kunye neblackberry torch 9800 sitsho
Molo, ndine-iPhone 4 kwaye bandinike umnqweno we-htc HD okanye itotshi eblackberry 9800. Ungandicebisa ntoni?
Phendula ukuthelekisa ne-iPhone 4 kunye neblackberry torch 9800
indoda ukuba ilizwi lesigarethi litshabalalise ividiyo inyamekele i-tronko kwaye ube namaqanda ambalwa aluhlaza
Kutshanje sinayo kwaye ibhetri iyindle, ndiyalele i-1550mAh evela e-China ukubona ukuba yintoni, ixabisa i-euro ezingama-5 ngokuhambisa. Ngaphandle koko iselfowuni enkulu enesikrini kunye neefoto ezenziwe ngombala wokwenyani, sine-2 Samsung Galaxy S kwaye zinemibala ngakumbi, kodwa i-htc ndiyayithanda inkcazo. Iividiyo zilungile nazo. Kuba sinezinto ezintathu ezichaziweyo kunye ne-Iphone4 sishiye iifoto kunye neekhamera zevidiyo, senza yonke into ngeefowuni eziphathwayo.
Molo, ndinayo i-hd ukusukela ngoFebruwari kwaye ndiyavuya! Ewe into embi kukuba ibhetri ayihlali ixesha elide kwaye okoko ndiyihlaziyile yaya kwi-2.3 kubonakala ngathi ihlala kancinci kodwa iWeno ndicinga ukuba ndiza kubamba ibhetri ye-1500 okanye njalo. Ngaphandle koko umatshini ophathwayo! Ndandinayo i-Samsung galaxy s kwaye inyani kukuba ndandingakwazi ukuyithelekisa, iscreen se-amoled ephezulu, inyani yabonakala kum njenge-shit enemibala… kwabonakala kumnandi kakhulu! Kwaye ngendlela ibicotha! Ndingathanda ukufumana iflaya yeHTC! Kufuneka ibe yi-sooo wapa !!
le fowuni yi- $ enkulu !!!
Phendula ku Mari_134
Ndingathanda ukubuza malunga nebhetri, kuba kwiindawo ezininzi kuthiwa ayihlali kancinci, kodwa iiyure ezingama-7 zincinci KAKHULU, njengoko besitsho apha. Oko kukuthi, njengomfundi ndishiya ikhaya ngo-8 kwaye ndiza kulisebenzisa ukumamela umculo, i-intanethi, kunye nezicelo ezifana ne-wapp, twitter kunye nezo zinto…. Ngaba ucinga ukuba kuya kuhlala nam?
Molweni, ndiyijonge ukuyithenga kodwa iyenzeka kum kwaye ndisaphuma ekhaya ngo8 ekuseni kwaye andibuyi kude kubethe u7 ngenjikalanga ndifuna ibhetri ihlale iiyure ezininzi.
NdineHTC Desire HD kwaye ndiyithathile ka-5 kwinkonzo yezobuchwephesha ukuze ifowuni ilungiswe. Ekuphela kwento abayenzileyo kum yibhodi ye-SWAP kwaye nokuba ayisebenzi ngokuchanekileyo. Kwenzeka ntoni ngalo lonke ixesha kukuba iyaphazamiseka, ihlala iqala kwakhona, ngamanye amaxesha isikrini asisebenzi kwaye ayisebenzi,…. Emva kwamaxesha ama-5 yisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye ungafumani sisombululo, ngeli xesha ndiyitshintshile ipleyiti, ikhamera ayijongi ngokuchanekileyo, xa ifowuni inyikima kubonakala ngathi iza kwaphuka, ……
Ukusuka kule foram ndifuna ukuba wonke umntu abone ulungiso olulungileyo olwenziwe yinkonzo yobuchwephesha eneVodafone.
Ndithethile nenkonzo yabathengi kwaye abandiniki zisombululo, nangaphezulu, konke abanako yingxaki, bandixelela ukuba ndibathumele ifeksi ngazo zonke izinto zokulungisa ifowuni yam, ekufuneka babenazo ukusukela oko Ulungiso lwenziwe evenkileni kwaye umntu othile anganditsalela umnxeba andenzele isithembiso kuba ukuba bandinika isithembiso sesiphelo esitsha kwaye ngaphezulu koko, ndibhatala kwaye ngokusisigxina, ke ishishini lam, kwaye Bona ishishini lijikelezile bathengisa enye itheminali ngexabiso lenkqubo yamanqaku, ndihlawulela enye itheminali kunye neHTC Desire HD ekwimeko embi ndiyigcina njengephepha elinobunzima. Andifuni zinikezelo, ndifuna ukunikezelwa kwisiphelo sendlela ekwimeko entle kwaye akufuneki ndibekhona kwisiphelo sendlela endala.
Xolela le parade kodwa kuye kwafuneka ndiyibeke kwenye indawo.
Iselfowuni isebenza ngokugqibeleleyo, ndineselfowuni inyanga, ndibeke iimovie ezininzi ukubona ukuba ibhetri ihlale ixesha elingakanani kwaye ndiza kuthi ngaphezulu kweeyure ezi-5 ndibukele imovie ngokulandelelana, kwaye ndisebenzisa usetyenziso kunye ne-intanethi…. Ngale nto ndithetha ukuba nayiphi na i-smartphone ukusukela namhlanje kufuneka ilayishe yonke imihla ukusukela oko izicelo bezisebenzise kakhulu. Ikhamera yam isebenza ngokuchanekileyo kum, uvakalelo lokuthinta alunakulinganiswa, ngokufutshane ndiyinika i-9,9 kwezi-10
ULuis Eduardo Castilla Hernande sitsho
kuba iselfowuni yam icima kuphela xa ibhetri ihlawulisiwe
Phendula uLuis Eduardo Castilla Hernande
IPapayaMobile isungula i-Injini yayo yeMidlalo ye-SDK ukwenza imidlalo ye-Android yeqonga layo